Wena dream ukubona ebumnyameni okwekati futhi uhlale engabonakali kwabanye? Ukuze afeze isifiso esinjalo ukusiza ebumnyameni amagogolo. Le divayisi isetshenziselwa emikhakheni ehlukahlukene ezifana:
ngoba zonke izinhlobo search imisebenzi;
ngoba imisebenzi professional onogada, amaphoyisa, amasosha kanye nabashayeli ngokuvamile okudingeka ukulungisa imishini umgwaqo ebumnyameni ephelele;
kulabo abasebenza ukuthatha izithombe noma ukudubula izilwane zasendle isiqophi ikhamera ebusuku.
Sidinga ebusuku umbono amagogolo okuzingela, ezokudoba nezokuvakasha. Ukugqoka kubo, uzokwazi ukuphinde abuthele ngokushesha izinkuni amnyama ngoba elivuthayo umlilo, kudlule ngokukhululekile ngokusebenzisa sehlozi hhayi ulahleke okukuwo, engakhubeki ku impande esihlahleni futhi ewele emgodini. Futhi yilokho nje izici eziyinhloko ewusizo kule divayisi. Lezi zihlanganisa ezihlukahlukene omkhulu kwezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama.
Nokho, embonweni wasebusuku amagogolo angathengwa at esitolo, zingabantu eqolo. Esinye isixazululo - ukubenza usekhaya. Zama ukukhumbula ulwazi lwakho neyezinto zemvelo, khona-ke kuyoba lula ukuqonda indlela yokwenza yabo ebumnyameni amagogolo. Thola izincwadi, funda ulwazi, ukulungiselela.
Step by step Umhlahlandlela
Thatha ingilazi plate amabili ageze nabo ikhambi potassium dichromate futhi sulfuric acid (amahora ama-4). Khona-ke ome ingilazi futhi uzilungise phezu inkomishi zobumba ezingeni ukuphakama hhayi ngaphansi kuka 10 cm (e amandla une ukubeka chloride tin). Manje yonke le ndawo kwesithando somlilo muffle. Ngo-pre-abavamile inkomishi ipuleti metal.
kuhhavini Preheat lokushisa okungenani 470 degrees Celsius. ukususa ngokushesha plate. Manje ukuqaphelisisa izinguquko ezenzeka nge amafasitela. Bayokhululwa 'kancane kancane liyombozwa ifilimu elincanyana, a wamanje conductive.
Ukuvala kuhhavini, ake izibuko cool. Faka isicelo amafasitela side, lapho kungekho ifilimu conductive, lacquer kanye aphansi ingilazi tiakarbomida futhi acetate phambili. Khona-ke uthele CONCENTRATE lapha alikhali, ngomusa ibangele ketshezi okuholela. Ngemuva kwemizuzu engu-15, susa ngokucophelela ingilazi lesi sitsha.
Kuhhavini indebe efanayo, kodwa manje uthele ke isixazululo esiliva. Yibeke phezu ingilazi.
kuhhavini Preheat degrees 900. I ipuleti kancane kancane esibukweni ifilimu kufanele ivele khona.
Ukuze uthole kungekho nto enemibala emihle crystalline powder ukuxubana enkomishini yethusi ZNS (10: 100) futhi shisisa ingxube kuhhavini.
Thatha nail "Tsapon" (I-izinyanda) u hlanganise powder. Manje iconsa le ngxube on ipuleti ukuvumela iconsi ukusakaza. Nakekela ukuze uthole ngisho enamathela. Xhuma amapuleti amabili, kancane ukugxisha, sula kubo, futhi ekupheleni inqubo okuholela isheke kudivayisi uphawu. Ukubuka kwasebusuku amagogolo sekulungile.
Ungakhohlwa ukuqoqa circuit high voltage generator!
Manje kufanele ukuxhuma zonke. I lens for the ithuluzi, thatha kusuka ikhamera bese eyepiece - lens we-lenticular wangakwesokunxele.
Ngemva kokuhlola bonke uxhumano, ungaqala uxhumano. Iqiniso lokuthi yonke into isebenza kahle, uzobona isici ntswininiza transformer.
Ukuze uthole isithombe esicacile ngaphezulu ishintshwa izikhathi eziningana futhi oscillator nobuningi voltage amazinga.
Uma uphumelela ukwenza lokhu, ke ebusuku umbono amagogolo ungeke ube ukuchitha imali eningi ukuthenga kubo esitolo.
Ponds Uzimele wocingo. Izibuyekezo nezincazelo
Abesifazane tie. Indlela tie it?
Indlela ukukhetha TV led. Izinzuzo Ububi
Efrijini AEG. Izibuyekezo kanye Izincomo
Zobumba isitsha sezimbali: incazelo izesekeli
Izidlaliso obathandayo for girls. izidlaliso Beautiful and funny for girls
7 izinto engenzeka uma uyeka ukwenza manicure
Ukwelashwa nokuvikelwa pink wayencisha umuntu amakhambi abantu
Indlela ukukhetha izibuko kwesokudla?
Iyini i-whiskey ethi "Black and White"?
Butterfly ngoba amadoda ngezandla zabo: usayizi wesithombe
Izifo ze-Meningococcal kanye nesifo se-Kernig
Mabhalane Job Description: amalungelo nezibopho
Isimo party yenkampani ngokwemvelo: imidlalo nemincintiswano yokwakha iqembu
Yikuphi ibhokisi kungcono ukubeka ekhaya lakho?
Ukudla eyenziwe polymer nobumba. Indlela sculpt?
Lapho mycoplasmosis e abesifazane futhi yiziphi nangemiphumela engaba khona yini kulumkhuhlane?